Corona virus: 252 elibuyisiweyo
Bonke abo ugula musa kufa!
Khawube nomfanekiso: Aftonbladet.
Kanye ngoku, 11.373 wagula yintsholongwane Corona. Kwabo, 259 yafa, kodwa 252 esiwahlanguleyo!
Corona gciwane Jonkoping
Izolo ndiye ndafumanisa ukuba Sweden iye nje wafumana ityala layo lokuqala ozinzisiweyo le coronavirus, ezimnyaka 20 ixhegokazi uyazimela kule County esibhedlela Ryhov e Jonkoping . ezimbini Ividiyo ephilayo Mna ndimvelisile kwi Corona ntsholongwane. Phakathi kwezinye izinto, kutheni lukoyikise sibe coronavirus?
Ekuqaleni, ndandicinga ukuba iyandoyikisa kwaye banzi. Yonke eyenza intsholongwane Corona awufi. Abo baye bafa baye abantu multi-ukugula, ezifana abaninzi kwabo bafa flu kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Ke kaloku, ukuba coronavirus kuyaqhubeka iqala ukuba umkhuhlane eqhelekileyo onyaka , nto leyo inokukhokelela amakhulu zokufa Swedish . Ukuba ezithile hayi abantu kwaye ingxelo phezulu.
252 baye bafumana
Inkosikazi eneminyaka engama-20 ubudala e Jonkoping oselula, mhlawumbi eyomeleleyo, yaye akufi. Yena ke uya kuphila kungekudala.
Kanye ngoku, 11.373 wagula yintsholongwane Corona . Kwabo, 259 yafa , kodwa 252 esiwahlanguleyo !
Thina abakholwayo kuYesu akayi kuniyekela thina ukoyika zigcwaliswe kunye kukoyika coronavirus. ukhuseleko yethu uYesu Kristu, nantoni na eyenzekayo.
UThixo kunisindisa isibetho
Izolo ebizwa Rune uyisemkhulu kum. Ngenxa coronavirus, wandinika umbhalo omkhulu:
Ndum 91: 5 Akuyi koyika zizothuso ebusuku, hayi utolo ukuba iimpukane emini, 6 ayikho isibetho ukuba uhamba ebumnyameni okanye isibetho olenyayo emini emaqanda.
Kutheni na ukuba ningoyiki ikholwa kuYesu? Kwiivesi elidlulileyo, wena ufumane impendulo:
Psalms 91: 1 Lowo umi ngaphakathi ukusekelwa ihlale bOsenyangweni phantsi emthunzini kaSomandla, 2 uthi: ". UYehova uyindawo yam, umboniselo yam, Thixo wam, I trust" 3 Uya uhlangulwe emgibeni womthiyeli, Endyikityeni isibetho yingozi . 4 ngeentsiba zakhe uya kukugubungela, phantsi kwamaphiko akhe wena uya kufumana indawo yokusabela. Ukuthembeka yakhe ikhaka nengweletshetshe.
Ukuba awuyifumenanga uYesu Kristu usindiswa ngoko ngokwenene Kuyathethelelwa ukuba wenze njalo. Uyakwazi ukufumana uYesu ngokuthandaza lo mthandazo ecetywayo phezulu ngqo kuYesu:
"Yesu, wamkele ngoku kwaye siyavuma ukuba njengeNkosi. Ndiyakholwa ukuba uThixo wamvusa wena kwabafileyo. Enkosi na ukuba ngoku kusindiswa. Ndiyabulela kuwe kuba undixolele ke ndiyabulela kuwe, ukuba Ngoku ungumntwana kaThixo. Amen. "
Vecka 29, fredag 23 juli 2021 kl. 18:27